တစ်ဦးကဘဟားမားဖောင်ဒေးရှင်းမှဘဟားမားယုံကြည်မှုနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတစ်ဦးအလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကုမ္ပဏီနှင့်တစ်ဦးယုံကြည်မှုအကြားစပ်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏တွေအများကြီးသို့မဟုတ်မ may အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကာကွယ်ရှိစေခြင်းငှါအရာတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူရှိနေသည်။ အမှီတကဲတို့သည်ဘဟားမား Registry ကိုအတူအလိုတော်သို့မဟုတ်ပုံစံတင်ပို့ရန်စာရွက်စာတမ်းများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ဘဟားမားဥပဒေများအခြားနိုင်ငံများတွင်တွေ့ရှိရအတင်းအဓမ္မအမွေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတားဆီး။ ယင်း၏စင်းလုံးငှားအတွက်ခွင့်ပြုလျှင်အဆိုပါတည်ထောင်သူအခြေခံအုတ်မြစ်ရုပ်သိမ်းရန်လိမ့်မည်။
ဘဟားမားစ်ဖောင်ဒေးရှင်းက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့နဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ပညတ်တရား၏တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရနိုင်ပါလိမ့်ဖို့စွမ်းရည်နဲ့ဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်စဉ်းစား။ တရားဝင် entity အဖြစ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသီးသန့်အခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြင့်၎င်း, မ settlor (တည်ထောင်သူ) ကပိုင်ဆိုင်သူတို့ဖြစ်လာမယ့်အခြေခံအုတ်မြစ်ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်တစ်ကြိမ်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များ, တစ်ဦးကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမှာတောင်မှလူထုဖြစ်နိုင်သည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသတ်မှတ်။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မည်သို့သူတို့ဖြန့်ဝေခံရဖို့ရှိပါတယ်အခါအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းပြည်နယ်များရှိပြဋ္ဌာန်းချက်များအထိအကျိုးခံစားခွင့်မှပြောင်းရွှေ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဘဟားမားအတွက်အမြစ်ကိုအုပ်ချုပ်တရား "2004 ၏ဖောင်ဒေးရှင်းအက်ဥပဒေ (က" ACT ") ဟုခေါ်တွင်သည်။ ဤပညတ်တရားကိုလိုအပ်သောဖောင်ဒေးရှင်းမှကောင်စီဒေသခံတစ်ဦးအေးဂျင့်များ၏ချိန်းထည့်သွင်းထားတဲ့ 2007 အတွက်ပြင်ဆင်လျက်, အကျိုးခံစားခွင့်များအခွင့်အရေးများကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအက်ဥပဒေအစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသော၎င်း၏ "ပဋိညာဉ်စာတမ်း" အားဖြင့်သာတည်တရားဝင် entity အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ ထိုအခါကတရားဝင်နေထိုင်သူ entity ဘဟားမားအတွက် domiciled နှင့်တရားစွဲဆိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ပညတ်တရား၏တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။
ဘဟားမားစ်ဟေတီ, ကျူးဘားအနီးရှိအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုဖလော်ရီဒါသော့ချက်များ။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည်အားသူတို့အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားသည်အဘယ်မှာရှိဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့်ကို "ဘဟားမား၏ဓနသဟာယ" ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစနစ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သူတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သားပါလီမန်နှင့်အတူရေးသားထားသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်။ ဗြိတိန်ဘုံဥပဒကိုလည်းယင်း၏ဥပဒေရေးရာစနစ်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။
ဘဟားမား Foundation မှအကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဘဟားမား Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
• အဘယ်သူမျှမ အခွန်: မည်သည့်မျိုးမျှအခွန်ရှိပါတယ်။ မှတ်ချက်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံတွေဆီကနေသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: တစ်ဦးကဘဟားမား Foundation မှစုစုပေါင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုပေးသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းဘဏ်အကောင့်များခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, အရစ်ကျအကောင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရှယ်ယာ, ကုန်စည်, အိမ်ခြံမြေ, အာမခံ, စတာတွေလည်းပါဝင်သည်သမျှသောပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေရေးရာပိုင်ရှင်အဖြစ်ပြုမူ
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: အဆိုပါ settlor (တည်ထောင်သူ) မရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စျေးကြီးနှင့်အချိန်စားသုံးစမ်းတရားစွဲဆိုမှုရှောင်ရှားနေကြသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်နှင့် settlor ရဲ့ဆန္ဒကိုအညီအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများပေါ်သို့သူတို့ကိုဖြတ်သန်းပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ထို settlor ၏အမည်များ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့်ကာကွယ်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
• လျှို့ဝှက်: အဆိုပါဥပဒေများကိုတတိယပါတီများမှရန်အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်ခွင့်ပြုချက်မရမည်သူမဆိုဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဤပညတ်တရားကိုချိုးဖောက်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေနှင့်ထောင်ဒဏ်အချိန်အပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုတရားစွဲဆိုမှုစေပါတယ်။
• အနိမ့်နိမ့်မြို့တော်: အဲဒီမှာတိုက်မြစ်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက် $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဲ့သို့, ဘဟားမားအရာရှိတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
(ထိုမှတ်ပုံတင်ကအတည်ပြုလျှင်) ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာမညျကိုအင်္ဂလိပ်လိုဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်ထဲမှာစကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ပါဝင်ရမည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. , တူညီတဲ့ဖြစ်ဆင်တူဒါမှမဟုတ်ဘဟားမားအတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ၏အမည်တူလို့မရပါဘူး။
ကသူ့ဟာသူအတွက်ဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ဦးကဘဟားမားဖောင်ဒေးရှင်း settlor (တည်ထောင်သူ) ကနေလွှဲပြောင်းအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤသည်ယခင်ပိုင်ရှင် (များ) မှအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှု insulates ။
တစ်ဦးကဖောင်ဒေးရှင်းကိုအစိုးရကနှင့်အတူ၎င်း၏ "ပဋိညာဉ်စာတမ်း" ဖြည့်စွက်အားဖြင့်သာတည်သည်။ တစ်ဦးကတစ်ပါတည်းကွပ်မျက်အလိုတော်လည်းအစားပဋိညာဉ်စာတမ်း၏အစိုးရနှင့်အတူတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အစိုးရကထို့နောက်မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအခါအခြေခံအုတ်မြစ်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းသည်။
1 ။ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အမည်ကား,
2 ။ အဆိုပါတည်ထောင်သူရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ။ အဆိုပါတည်ထောင်သူတစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity, မှတ်ပုံတင်နှင့်ဥပဒေရေးရာအရေအတွက်အရပျမြားနှငျ့လုပ်ငန်းစဉ်၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဘဟားမားအတွက်၎င်း၏လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်လျှင်၎င်း,
3 ။ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တ္ထု,
4 ။ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ကနဦးပဒေသာပင်များလည်းသူတို့ဖော်ပြချက်;
5 ။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များသတ်မှတ်ရေး;
6 ။ ဖြစ်တည်မှု၏ကြာချိန်၏သတ်မှတ်ရေး (အချိန်အစဉျအမွဲသို့မဟုတ် fixed ကာလ);
7 ။ အတွင်းရေးမှူးရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာဘဟားမားအတွက် (တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်), သို့မဟုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အေးဂျင့်နှင့်ဘဟားမားအတွက်ရုံးလိပ်စာမှတ်ပုံတင်;
8 ။ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာအနည်းဆုံး $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်အခြားငွေကြေး၎င်း၏တခုတော့ဖြစ်ကြောင်းကြေညာစာတမ်း,
9 ။ အဆိုပါတည်ထောင်သူတစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity လျှင်တစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေအများပြည်သူရှေ့တွင်တည်ထောင်သူရဲ့လက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လက်မှတ်။
ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဆောင်းပါးများလည်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများအဖြစ်လူသိများကြသည် optional ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒီ option ကိုရွေးချယ်တော်မူလျှင်, သူတို့အဘို့အပေးနိုင်ပါသည်:
1 ။ ပိုင်ဆိုင်မှုဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်မည်သို့;
2 ။ ကနဦးအကျိုးခံစားရ၏ identity; နှင့်
3 ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်စည်းမျဉ်းများ။
ထိုအခါကတရားဝင်နေထိုင်သူ entity ဘဟားမားအတွက် domiciled နှင့်တရားစွဲဆိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ပညတ်တရား၏တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။
1 ။ : သတ်မှတ်ခြင်းအဆိုပါအေးဂျင့်ရဲ့ (ခနျ့အပျထားလျှင်) သို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးရဲ့ (ခနျ့အပျထားလျှင်) ကြေငြာချက်
•ဖောင်ဒေးရှင်း (ရှိပါက) အတွက်ဆောင်းပါးများ၏နေ့စွဲ;
•အေးဂျင့်ရဲ့ (ခနျ့အပျထားလျှင်) သို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးရဲ့ (ခနျ့အပျထားလျှင်) အမည်နှင့်လိပ်စာ;
•အဖောင်ဒေးရှင်း (set ကိုကာလသို့မဟုတ်အစဉျအမွဲ) ၏ Duration:;
•အခြားငွေကြေးအနည်းဆုံး $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်တခုတော့နေသောကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုး,
2 ။ ၎င်းတို့၏အမည်များနှင့်လိပ်စာများအပါအဝင်ပထမဦးဆုံးအရာရှိများ၏စာရင်းတစ်ခု; နှင့်
3 ။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာသောအေးဂျင့်သို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးတို့ကကြေညာစာတမ်း။
မှတ်စု: ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်ဆောင်းပါးများအဆိုပါမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ သူတို့ကမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာအများပြည်သူလက်လှမ်းမီခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။
အဆိုပါအက်ဥပဒေဟာတည်ထောင်သူသာမျှအရာရှိများခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်သည့်အခါမဟုတ်လျှင်တစ်ကောင်စီခန့်အပ်ရန် option ရှိပါတယ်, ပြီးရင်ကလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာကြောင်းပေးပါသည်။ အဆိုပါကောင်စီနှစ်ခုကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များ၏နိမ့်ဆုံးတစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity နှင့်အနည်းဆုံးတဦးတည်းကသဘာဝလူတစ်ဦး, သို့မဟုတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity ရှိရမည်။ အဆိုပါကောင်စီသည်ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ, ထိုဆောင်းပါးများ '' ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အက်ဥပဒေနှင့်အတူဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့လိုက်နာမှုသေချာ။ အားလုံးအရာရှိကောင်စီရဲ့ဆန္ဒကိုနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမယ်, အဆိုပါကောင်စီအားလုံးမှတ်တမ်းများ, စာအုပ်တွေနဲ့စာရင်းကိုင်ဖို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကောင်စီပါဝါရှိပါတယ်:
1 ။ တစ်ဦးစာရင်းစစ်ခန့်အပ်;
2 ။ အစည်းအဝေးအားလုံးကိုအသိပေးကြလိမ့်မည်
3 ။ မကြားလိုအားလုံးကိုအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်ရှိသော်လည်းမဲပေးမဟုတ်, လက်ျာ,
4 ။ အဆိုပါအရာရှိထံသို့ဖြန့်ဝေသည့်အခါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သစောင်ရေကိုလက်ခံရရှိ;
5 ။ အင်အားကြီးအရာရှိထံသို့လွှဲအပ်ကြသောအခါသတင်းအချက်အလက်များရယူရန်။
အရာရှိများမှာသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများရှိနိုင်ပါသည်။ တဦးတည်းအရာရှိတစ်နိမ့်ဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းမှတ်ပုံတင်မတိုင်မီခနျ့အပျထားရမည်ဖြစ်သည်။ Undischarged ဒေဝါလီခံ, ပြစ်မှုထင်ရှားရာဇဝတ်ကောင်များနှင့်စိတ်ပိုင်း incapacitated ပုဂ္ဂိုလ်များအရာရှိအဖြစ်မခံနိုင်ပါ။
တစ်ကောင်စီမရှိခြင်းမှာအရာရှိဖောင်ဒေးရှင်း၏အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မရှိကြပေ။ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးစဉ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှရေးရာပို့ချစဉ်အရာရှိများကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်အသုံးပြုရမည်။ သူတို့ကပဋိညာဉ်စာတမ်း, ဆောင်းပါးများ, နှင့်အက်ဥပဒေကိုလိုက်နာရပေမည်။ အရာရှိများတကာက default, စုစုပေါင်းပေါ့ဆမှု, ရိုးသားမှု, လိမ်လည်မှု, ဒါမှမဟုတ်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများ၏လုပ်ရပ်များများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေကျင်းပပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေတစ်ဦးအတွင်းရေးမှူး optional ကို၏ချိန်းစေသည်။ အဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်, အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကအရာရှိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအေးဂျင့်အဖြစ်ခန့်အပ်သည်မဟုတ်လျှင်, အတွင်းရေးမှူးအေးဂျင့်များ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များယူဆပါလိမ့်မယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုအေးဂျင့်ခန့်အပ်လျှင်, အတွင်းရေးမှူးပုံမှန်အတွင်းရေးမှူးတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးအမြစ်ကိုတစ်ဦးအေးဂျင့်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ခန့်အပ်ရန် option ရှိသည်။ အေးဂျင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးလိုင်စင်ရရမည်ဖြစ်သည်။ လိုင်စင်ရဘဏ်များနှင့်ယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးအေးဂျင့်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရနိုင်ပါ။ ဤသည်ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဆိုပါအေးဂျင့်ရဲ့တာဝန်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ anti-ငွေကြေးခဝါချမှုစည်းမျဉ်းများကအောက်ပါနှင့်သေချာဖောင်ဒေးရှင်းအက်ဥပဒေနှင့်အတူလိုက်နာအောင်ပါဝင်သည်။ အေးဂျင့်လိမ်လည်မှု မှလွဲ. အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေး liabilities မှဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပါသည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို $ 10,000 B က ($ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေးအတွက်တခုတော့ဖြစ်ရပါမည်။
တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ် (ပိုင်ဆိုင်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအပါအဝင်) ကုသိုလ်ဖြစ်, မိသားစုအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်မည်သည့်အရာကိုပြုသင့်သည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည့်တစ်ဦးအဖြစ်ကြေညာရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိရမည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေလျှို့ဝှက်၏ညာဘက်နှင့်အတူအားလုံးအကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးစီးပွားတတိယပါတီများမှမှထုတ်ဖော်မရနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်ဘဟားမားဥပဒေများကသို့မဟုတ်တစ်ဘဟားမားတရားရုံးသတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်တစ်ခုအမိန့်ထုတ်ဝေလျှင်လိုအပ်သည်ဆိုပါကတစ်ဦးခြွင်းချက်ရှိနေပါသည်။ ဒါကအားလုံးအရာရှိ, အကာကွယ်ပေးသူ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကအခြားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ, ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရှေ့နေနှင့်စာရင်းစစ်များနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်းမှဝန်ထမ်းသက်ဆိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်ချိုးဖောက် $ 50,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဦးရေအများဆုံးဒဏ်ငွေသုံးနှစ်ဦးရေအများဆုံးထောင်ဒဏ်နှင့်အတူတစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ရလဒ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, လျှို့ဝှက်ချက်များ, privacy ကိုနိမ့်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်မြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: တစ်ဘဟားမား Foundation မှအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။